ကေလာသစေတီတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကေလာသစေတီတော် သည် တောင်စွန်းမြို့တွင် တည်ရှိသည့် စေတီတော်တစ်ဆူ ဖြစ်သည်။ ကျိုက်ထီးရိုးတောင်၏ အနောက်တောင်ဘက် တောင်စွန်းရွာအနီးတွင် တည်ရှိသည်။
မြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မူချိန် ဖြစ်၏။ ထိုအချိန်တွင် သုဝဏ္ဏဘုမ္မိတိုင်း၌ တိဿဓမ္မမင်းသည် စိုးစံ၏။ သာသနာနှစ် ၁၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် မြတ်စွာဘုရားသည် သုဿဏ္ဏဘုမ္မိတိုင်းသို့ ကြွလာခဲ့၏။ ထို့နောက် မြတ်စွာဘုရားသည် ခုနစ်ရက်တိုင်တိုင် တရားဟောကြားလေ၏။
တရားဟောကြားပြီးနောက် ဂစ္ဆဂိရိတောင်မှ တိဿရသေ့၊ ဗန္ဓဝဂီရိတောင်မှ သီဟရသေ့၊ ကေလာသတောင်မှ ကေလာသရသေ့တို့ကို ဆံတော်နှစ်ဆူစီ ပေးသနားတော်မူခဲ့၏။ ကေလာသရသေ့သည် ဆံတော်တစ်ဆူကို နေထိုင်သီတင်းသုံးသည့် ကေလာသတောင်တွင် ဌာပနာကို စေတီတည်ခဲ့၏။ ထိုကေလာသရသေ့သည် ကွယ်လွန်သည့်အခါ ဆံတော်တစ်ခု ကျန်ခဲ့၏။ ထိုကျန်ခဲ့သည့် ဆံတော်တစ်ခုနှင့်အတူ တိဿရသေ့သည် မိမိ၏ ဆံတော်နှစ်ဆူနှင့်အတူ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားတွင် ဌာပနာထည့်ကာ စေတီတည်ခဲ့၏။
စေတီတော်သည်တည်ရှိရာတောင်သည် ပေ ၁၀၀၀ ကျော်မြင့်သည်။ စေတီတော်၏ ဉာဏ်တော်မှာ ၁၁၃ ပေ မြင့်သည်။ ရင်ပြင်တော်မှာ ၁၇ တောင် ရှိသည်။
စေတီတော်ကို သာသနာနှစ် ၁၁၇ ခုနှစ်တွင် တည်ခဲ့သည်။ သထုံတိုက်ကုလားမြို့စား သပေါ်မင်းလက်ထက်တွင် တည်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ကျိုက်သီလပေါ်ဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ နောင်တွင် ကျိုက်ကေလာသ၊ ထို့နောက် ကေလာသဘုရား စသည်ဖြင့် တွင်ခဲ့သည်။
သာသနာနှစ် ၂၃၅ − တိုက်ကုလားမြို့ သီရိမာသောကမင်းသည် စေတီတော်ကို ပြုပြင်ခဲ့သည်။
သာသနာနှစ် ၁၂၂၂ − နောင်အခါတွင် တောဖုံ့းလာသည့်အတွက် သံဃာတော်များ ဦးဆောင်ပြုပြင်ကာ ထီတော်အသစ် တင်ခဲ့သည်။
သာသနာနှစ် ၁၂၄၀ − ဆရာတော် ဦးမဉ္စူသည် ထိန်းသိမ်းကာ ၁၂၄၄ တွင် ထီးအသစ် လှူခဲ့သည်။
သာသနာနှစ် ၁၂၆၄ − အမြင့် ၁၆ ပေ၊ အနံ ၉ လက်မရှိသော ထီးတော်သစ်ကို တင်လှူခဲ့သည်။
သာသနာနှစ် ၁၂၉၂ − ကဆုန်လဆန်း ၁၄ ရက်နေ့တွင် စေတီတော်၏ ငှက်ပျောဖူးသည် မိုးကြိုးထိမှန်ခဲ့သည်။ ဝါခေါင်လတွင် မိုးဒဏ်ကြောင့် ပြိုကျခဲ့သည်။
သာသနာနှစ် ၁၂၉၄ − ၁၂၉၄ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလတွင် ဒါယကာများက ပြုပြင်ခဲ့သည်။ ဝါဆိုလတွင် ကျိုက်ထိုမြို့ ရာဇဝတ်ထောက် ဦးဖိုးစိန်က ကမ္မကထပြု၍ စိန်ဖူးတော် တင်ခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ လှသမိန် (၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ). မြန်မာနိုင်ငံတခွင် ဘုရားသမိုင်းပေါင်းချုပ်. အမှတ် − ၂၁၄၊ လမ်း − ၃၀၊ ရန်ကုန်မြို့: မဟာဝိဇ္ဇာစာပေ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကေလာသစေတီတော်&oldid=440313" မှ ရယူရန်
၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၃:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၃:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။